မြန်မာနိုင်ငံသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးချ၍ မရနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် Absolut ခရီးသွား
မြန်မာနိုင်ငံက အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အတူအခြားနိုင်ငံများအကြားနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ် တရုတ်နိုင်ငံeအိႏၵိယ, ထိုဒေသ၏နှစ်ခုကုမ္ပဏီကြီး။ သို့သော် ျမန္မာႏုိင္ငံလူသိများသည့်အတိုင်းစတုရန်းကီလိုမီတာ ၇၀၀၀၀ နီးပါးရှိပြီးသေးငယ်သည်မဟုတ်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရပ်ကွက်ထဲမှာသင့်မှာကြည့်စရာများစွာရှိတယ်။ သင့်ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်မြို့ကြီးများရှိပါတယ်, ရန်ကုန်, ဒါပေမယ့်အချိန်မီရပ်တန့်ပုံရသည်သေးငယ်တဲ့မြို့များ။ ထိုနည်းတူစွာပင်ရှိသည် ဘုံဗိမာန်များ, ဒါပေမယ့်လည်းအတူ အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်တောင်တန်းလမ်းကြောင်းများ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ခိုင်မာသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်အကြောင်းအနည်းငယ်သိလိုလျှင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
1.2 Naipyidó, တစ္ဆေမြို့
1.3 ပုဂံ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိဘုရားကျောင်းများ၏မြို့တော်
1.6 Kakku Stupa သစ်တော
1.9 ငပလီကမ်းခြေ၊ လူသိမများသေးသောမြန်မာနိုင်ငံ
ငါတို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်စိန်ဖြစ်သည်။ အတော်လေးမကြာသေးမီကပြုလုပ်ထည့်သွင်းထားသည် အရှေ့တောင်အာရှရှိဆားကစ် နှင့်၎င်း၏alရာမနှင့်သာယာလှပအံ့သြဖွယ်အံ့ဖွယ်အမှုများသည်တစ်နှစ်လျှင်လူသန်းပေါင်းများစွာကိုလက်မခံပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အကောင်းဆုံးကိုသင်ပြပါမည်။
လူ ဦး ရေငါးသန်းကျော်ရှိသောလူ ဦး ရေထူထပ်သောမြို့သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိမြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်အတွင်းသို့အဓိကဝင်ပေါက်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ သို့သော်မြို့တော်သည်အထူးသဖြင့်လှပသောမြို့မဟုတ်ပါ၊
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်ကြည့်ရှုရမည့်အရာများရှိသည်။ ဤသည်၏ဘာသာရေးရှုပ်ထွေးသောအမှုဖြစ်ပါတယ် ရွှေတိဂုံတူညီသောနာမ၏စေတီပုထိုးသည်အရာ၌တည်၏။ ၎င်းသည်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ထုတစ်ခုဖြစ်သည် လူရွှင်တော်) 2500 မီတာအမြင့်နှင့်ရွှေရေချိုး။ ဒဏ္theာရီကနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ သက်တမ်းရှိသော်လည်းကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏ ၆ ရာစုနှင့် ၁၀ ရာစုနှစ်များအကြာတွင်ချိန်းတွေ့ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်တိုင်းပြည်တွင်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည် ဗုဒ္ဓ.
ရန်ကုန်တွင်မြင်တွေ့ရသောတစ်ခုတည်းသောရုပ်သေးရုပ်မဟုတ်ပါ ငါတို့သည်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေး ဆူးလေဘုရားပုံသဏ္oာန်နှင့်ရွှေအမိုးခုံးတူတူတူညီကြသည် ချောက်ခတ်ဘုရား, ၌ဖြစ်ပျက်အဖြစ်, ဗုဒ္ဓ၏aရာပုံသကျသခေံ ငေါ့ကြီး.
ကဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်ခံချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဤတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုကျေးလက်ဒေသတစ်ခုတွင်ဖန်တီးပြီးနယူးယောက်မြို့ထက် ၆ ဆကျယ်ဝန်းသည်။ သို့သော်ထိုသို့ရှိသည် အလွန်သေးငယ်တဲ့လူ ဦး ရေ။ တကယ်တော့, လူ ဦး ရေရဲ့အရေအတွက်ကတစ်သန်းခန့်မှန်းထားသည်ပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားနေရာတစ်ခုအဘို့အချည်းနှီးဖြစ်သော်လည်းမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီကိုလာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံမပြုသော်လည်း၊ အကယ်၍ သင်ပြုလုပ်ပါကကြီးမားသောဗုဒ္ဓဘာသာရုပ်ပွားတော်များကိုတွေ့မြင်ရန်သေချာစေပါ pat.
နိုင်ငံ၏အဓိကကုန်းပြင်မြင့်တွင်တည်ရှိသည် Riverရာဝတီမြစ်မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ဘုရားကျောင်းသည်။ လေးထောင်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမယ့်သင်သွားလည်ပတ်ရမယ့်သူတွေကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် အာနန္ဒာတစ်ဆယ်ရာစုမှခေါ်တော်မူ "ဗမာ Westminster Abbey" ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကြောင့်၎င်း၊ ဆူလာမနီXII မှဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ "သရဖူအတွက်ရတနာ"; ဓမ္မာရုံ၄ င်းတို့အားလုံးနီးပါးရွှေရှိသောinရိယာတစ်ခုတွင်၎င်း၏အညိုရောင်အရောင်အတွက်မှားစရာနှင့်၊ ရွှေဇုန်ဗုဒ္ဓပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်လူရွှင်တော် ၄ ဦး ဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့သင်၏ခရီးစဉ်တွင်နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာမန္တလေးမြို့ဖြစ်သည်။ သူ၏အမည်မှာသင်မြင်တွေ့နိုင်သမျှအရာအားလုံး၏အကြိုမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ အစပြုရန်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်များနှင့်အရက်ဆိုင်များပြည့်နှက်နေသောမြို့ဟောင်း၏ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများပေါ်တွင်ရှုံးနိမ့်ပါ။
သို့သော်အားလုံးအထက်, အဖိုးတန်သွားရောက်ပါ မန္တလေးနန်းတော်တိုင်းပြည်၏နောက်ဆုံးဘုရင်နေထိုင်ခဲ့ဘယ်မှာ။ ၎င်းသည်နန်းတော်အတွင်း၌တည်ရှိပြီး ၁၉ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အထပ်များစွာထပ်နေသောအဆောက်အအုံများစွာပါဝင်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုစီ၏အရေးပါမှုကို၎င်းတို့အားအရေအတွက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည်။
မင်းတို့မန္တလေးမှာမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရမယ် Mahamuni ဘုရားကျောင်းဗုဒ္ဓ၏မနည်းလှသောစည်းမျဉ်းများတည်ရှိသည်။ ဒဏ္endsာရီများနှင့်သို့ရာတွင်သို့ရာတွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည် သာစစ်မှန်သောမိတ္တူ သောကမ်ဘာပျေါတှငျသူ့ကိုတည်ရှိ။
နောက်ဆုံးသင်သည်သင်၏ခြေလှမ်း ၁၇၀၀ ကိုတက်နိုင်လျှင်သင်ရောက်နိုင်သည် မန္တလေးတောင်ကုန်းမြို့မှအံ့ဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုသင်ရရှိမည်။
မန္တလေးမှဖြစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အထင်ရှားဆုံးရထားလမ်းခရီးစဉ်စွန့်စားသူများအတွက်သာသင့်တော်သည်။ ဒါဟာမြို့တော်သို့ရောက်ရှိ လားရှိုး, ဒါပေမယ့်၎င်း၏အထင်ကြီးရှုခင်းများအဘို့အထင်ရှားနှင့်, အားလုံးအထက်, အဘို့ Gokteik viaductမျက်နှာပြင်နှင့်မီတာ ၇၀၀ နီးပါးဝေးသည့်ပျက်စီးလွယ်သောသတ္တုကိုယ်ထည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရထားလည်းမြို့ထဲမှာရပ်လိုက်တယ် သီပေါမြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံသည်ခရီးသွား circ ည့်သည်များအပြင်ဘက်သို့အလည်အပတ်ခရီးသွားရန်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဒီမြို့မှာအာရှနိုင်ငံသားတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဟာဘာလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ပုဂံမြို့မှာရှိတဲ့ Little ပုဂံကိုလည်းသွားနိုင်ပါတယ် ရှမ်းနန်းတော် နှင့် မူဆလင်ဗလီ။ သို့သော်အားလုံးအထက်, တက်သွားပါ ဗုဒ္ဓငါးပါး၏တောင်ကုန်းနေမှသင်အံ့မခန်းနေဝင်ချိန်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
Kakku Stupa သစ်တော
မင်းတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှာဘုရားကျောင်းတွေ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အာရှနိုင်ငံ၌တမူထူးခြားသောရှုခင်းကိုတွေ့မြင်လိုပါက၊ Kaku။ ၎င်းသည်လူရွှင်တော် ၂၅၀၀ ခန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြီးမားသောလမ်းလျှောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုစီသည်ဗုဒ္ဓရုပ်ပုံများပါ ၀ င်ပြီးသင့်အားအမှန်တကယ်စွဲမှတ်သွားစေလိမ့်မည်။
တည်နေရာ ရှန်တောင်များ မီတာ ၉၀၀ နီးပါးအမြင့်တွင်ဤရေကြောင်းသွားလာမှုသည်မှော်ဆန်လှသည်။ ဦး ဆုံးအနေနှင့်၎င်းသည်မြစ်တစ်စင်းနှင့်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ရှည်လျားပြီးကျယ်ပြန့်မှု ၅ ခုသာရှိသည်။ သို့သော်ထို့အပြင်၎င်း၏ဘဏ်များအပေါ်ရှိပါတယ် ရွာနှစ်ရာ အဘယ်သူသည်မြို့သားတို့, အင်တာ (o "ရေကန်သားများ"), ရိုးရာမြန်မာကျက်သရေအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။
ပတ်ရစ်အခြားနေရာ ဘာသာရေး ပုပ္ပါးတောင်ပါ။ ငါတို့ပြောတာကိုနားလည်နိုင်ဖို့သူ့ကိုလွင်ပြင်ပေါ်မှာအထီးကျန်နေတာကိုတွေ့ဖို့လုံလောက်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ထိပ်မှာလှပသောဖြစ်ပါတယ် Taung Kalat ဘုန်းကြီးကျောင်း, မှော်အဲဒီမှာနေရာချပြီပုံရသည်။
ထိပ်ကိုတက်ဖို့သင်အဆင့် ၇၇၇ ဆင့်တက်ရမည်။ သို့သော်သင်သယ်ဆောင်ရမည့်အရာများကိုမရေမတွက်နိုင်သောကြောင့်သတိထားပါ မျောက်များ သူတို့သည်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပြီးသင်အနည်းဆုံးသတိမဲ့စွာဖြင့်သိမ်းယူလိမ့်မည်။
ယုတ္တိနည်းအရဆိုလျှင်မြန်မာနိုင်ငံ၏အရွယ်အစားအတိုင်းအတာနှင့်တူညီသောခမ်းနားထည်ဝါသောကမ်းခြေများရှိရပေမည်။ သင်၏အမှု၌, သူတို့သည်၏inရိယာ၌ရှိကြ၏ ငပလီ။ သူတို့ကခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေအမြတ်ထုတ်ဖို့စတင်နေပြီ။ သူတို့ကိုပျော်ရွှင်ခြင်းသည်ဤမျှလောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်သင်အနားယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုလွှမ်းမိုးသည် အရှေ့တောင်အာရှ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ရာသီနှစ်ခု: စိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့။ ပထမတစ်ခုမှာမိုးရာသီအပြင်အပြင်မုတ်သုန်ရာသီဖြစ်ပြီးအလွန်ပူပြင်းလွန်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုခြင်းမပြုပါ။
အထူးသဖြင့်ခြောက်သွေ့သောရာသီတွင်တိုင်းပြည်သို့သွားရောက်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည် ဒီဇင်ဘာလနှင့်မတ်လအကြား။ သို့သော်ဤလများ၏ပထမ ဦး ဆုံးစျေးနှုန်းများပိုမိုစျေးကြီးသောအဘို့အမြင့်ရာသီနှင့်တိုက်ဆိုင်။ ဤအကြောင်းများကြောင့်ဇန်နဝါရီလမှမတ်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုသိကျွမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်၎င်း၏ gastronomy ကိုမြည်းစမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်မစမ်းပါကအနည်းဆုံးလည်ပတ်မှုသည်မပြည့်စုံပါ။ မြန်မာအစားအစာကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှအလွန်သြဇာညောင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ, အိႏၵိယ y Tailandia။ အကျိုးဆက်ကတော့ ဆန် ၎င်းသည်သူတို့၏ဟင်းလျာများတွင်အဓိကပါဝင်သောအရာဖြစ်ပြီးကုန်ကြမ်းများသည်လည်းထင်ရှားသည် ကပ္ပလီပင်လယ်ငါး.
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၊ glutinous ဆန် သို့မဟုတ်၎င်း၏အမျိုးမျိုးအတွက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်အဖြစ်ပေးအပ်သည် ဟုတ်ပါတယ် ဒါကိုမနက်စာအတွက်ယူသည်။ အလားတူပင် ခေါက်ဆွဲ o ခေါက်ဆွဲ ၎င်းတို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ဟင်းလျာများနှင့်ပတ်သက်။ အဆိုပါ ဟင်းချိုခေါ် လှိုင်, အအက်ဆစ်သူမြားကိုခေါ်ပေမယ့် ချစ်သူ။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် နဂါး ၎င်းတို့သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဆန်ဖြင့်စားသောကစော်ဖောက်ပုစွန်များ၊ က လက်သည်း လက်ဖက်ရွက်အသုပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်မြေပဲပါဝင်သည် hto-hpu nwe ၎င်းတွင် ၀ က်သားသို့မဟုတ်ကြက်သားဖြင့်ကုလားပဲဂျုံမှုန့်ပါဝင်ပြီး၊
သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးသားပန်းကန်ဖြစ်သည် ချစ်တယ်ဆန်ခေါက်ဆွဲနှင့်ငါးနှင့်ကြက်သွန်နီဟင်းရည်တို့ပါရှိသည်။ အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကြက်ဥပြုတ်များ၊ ပဲဟင်းကြော်များနှင့်ငှက်ပျောသီးများကဲ့သို့သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်လည်းသင်စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ် ဗမာဟင်း၎င်းတွင်ဆန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ yeapi ye ye။ နောက်ဆုံး၊ နန်းကြီးကျောက် ကြက်သား၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ ကြက်ဥပြုတ်နှင့်ပဲပင်များပါသောကြီးမားသောခေါက်ဆွဲခြောက်ကြီးပါရှိသည်။
သင်၏ပုံမှန်ထမင်းဟင်းကိုအပြီးသတ်ရန်, သင်သည်လည်းမြန်မာနိုင်ငံ၌သကြားလုံးရှိသည်။ တကယ်တော့တစ် ဦး ယူပါ ကိတ်မုန့်နှင့်အတူလက်ဖက်ရည် ၎င်းသည်နိုင်ငံသားများ၏အစဉ်အလာဖြစ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးသောဖြစ်ကြသည် ကျောက်တံတားစပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အုန်းသီးနှင့်အတူချိုမြိန်တဲ့ Bun တစ်မျိုး ပိန်းမူး (ကျနော်တို့ကယူဆ ကျောက်တံတား fluffy ချိုမြိန်သောကိတ်မုန့်ဖြစ်ကြ၏) ။
သို့သော်သင်သည်အသီးကိုပိုနှစ်သက်ပါကစပိန်တွင်သင်မတွေ့ရမည့်အရာများရှိသည်။ ဥပမာ၊ ဒူးရင်း။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အနံ့ကအတိအကျမပျော်ဘူးလို့သတိပေးရမယ်။ တကယ်တော့သူမကိုခေါ်သောသူများရှိပါသည် "ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးရွားဆုံးအသီး"။ သို့သော်သင်သည်ထိုသက်ရောက်မှုကိုကျော်လွှားပြီးသည်နှင့်သူတို့၏အသားများသည်ထူးခြားသောအရသာရှိသည်။
ဒါကြောင့်အဖျော်ယမကာမှကြွလာသောအခါ, လက်ဘက်ရည် ၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောမူကွဲအတွက်အမျိုးသားရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မြန်မာတွေကများများစားစားစားတယ် ဘီယာ ပင် ကို ထောက်.။ theရိယာအများစုမှာဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည် tubaအုန်းလက်ဖြင့်ရရှိသောအရက်ယမကာတစ်ခု။
အာရှနိူင်ငံကို ၀ င်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဖြင့်ဖြစ်သည် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်။ သူတို့ကအစရှိသည် မန္တလေး y Naipidóဒါပေမယ့်ပြည်ပကနေပျံသန်းမှုရှားပါးဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်လျှင်မြို့ကြီးများအကြားပြောင်းရွှေ့ရန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဘတ်စ်ကား။ သူတို့ကိုသင်ခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်များမှလေအေးပေးစက်မှသည်ခရီးသည် ၃၀ ခန့်အထိသေးငယ်သည့်ဗင်ကားများအထိအမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။ သင်၌လည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် ကားမောင်းသူနဲ့ကားငှားပါဒါပေမယ့်စျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး။ ခရီးသွားနိုင်သည့်နောက်တစ်နည်းမှာ လှေ နိုင်ငံ၏မြစ်များမှတဆင့်စီးဆင်း။
နောက်ဆုံးမြို့ကြီးများသို့လည်ပတ်ရန်သင်၌လည်းရှိသည် မြို့ဘတ်စ်ကား။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးပုံမှန်ဖြစ်ကြသည် ချစ်သူအာရှတိုက်မှာလူကြိုက်များတယ်။ ပိုများသောမူရင်းဖြစ်ကြသည် ကားမောင်း နှင့် ဆူးပိန်သုံးဘီးနှင့်ဆင်တူနှင့်အတူ tuk-tuk de Tailandia။ သို့သော်ဒေသခံများအတွက်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပိုမို ဦး စားပေးသောနည်းလမ်းမှာဖြစ်သည် ဆိုင်ကယ်။ အဓိကမြို့ကြီးများအားလုံးတွင်၎င်းတို့အတွက်ငှားရမ်းမည့်နေရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသည်လှပသောတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကြီးမားသောခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၏အမြတ်ထုတ်ခြင်းကိုမခံရသေးပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားကမ်းလှမ်းသောကြောင့်ပြောင်းလဲနေပြီးဖြစ်သည် အံ့ဖွယ်ဗိမာန်များ y တစ်ခု exuberant နှင့်အံ့မခန်းသဘောသဘာဝ။ အာရှတိုင်းပြည်အကြောင်းသိချင်လို့လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » မြန်မာနိုင်ငံ
အဘယ်အရာကို Canary Islands တွင်ကြည့်ရှုရန်